Torohevitra Nootropic Stack tsara indrindra: Izay rehetra tokony ho fantatrao [traikefa 5 taona]
Jolay 27, 2019
Fantatrao ve fa mety ho tonga hendry kokoa ianao nefa tsy handoro ny fianarana jiro mandritra ny alina? Raha misy vovony iray afaka manampy anao hanatsara ny fitadidiana anao na mampitombo ny torimasonao, dia hoentinao ve?
ankehitriny, zava-mahadomelina, fantatra koa amin'ny hoe nootropics, dia lasa olon-tiana ho an'ny maro. Ny anton'izany dia satria fantatr'izy ireo fa tsara kokoa ny andavanandrom-piainan'ny tsirairay. Ny tombony nootropic dia avy amin'ny faharetan'ny faharetan'ny saina, fifantohana bebe kokoa, fampitomboana ny fifantohana ary koa ati-doha mailo.
Ho hitanao fa misy ny mpianatra izay tsy dia mahatadidy loatra ary maniry ny hanadino ny fanadinana nefa tsy miady mafy. Misy koa olona manana asa ambony manana tsatoka avo izay te hihazona ny fifantohana avo mandritra ny andro.
Ankoatr'izay, misy olona mampiasa nootropics sy vovony mifangaro vovoka hifehezana ny aretin'ny motera toy ny Alzheimer, ny aretina Hunnington, Parkinson, ary ny ADHD. Izany no antony mety handraisanao mampiasa nootropics hijanona alohan'ny ambiny.
Amin'ity sombintsombiny ity dia nampihenika ny laharana 15 izahay paty nootropic ary inona no mampiavaka azy ireo.
Ny fahafantarana ny karazany hafa nootropics
Taloha, ny indostrian'ny zava-mahadomelina dia nitombo, ary ny nootropics miharihary hatramin'izay. Ireto ny sokajy enina izay mety ho voasokajy nootropika;
Ireto ny sasany amin'itony enhancer am-pahalalana be mpampiasa izay amidy amin'ny counter. Ny mahasoa azy ireo dia ny fanatsarana ny fiasan'ny krizy ataon'izy ireo nefa tsy manao toa ny manaitaitra na manaitra azy. Na dia mbola tsy azon'ny mpahay siansa aza ny fomba fiasan'izy ireo, dia voalaza fa mampitombo ny fandatsahan-dra ary ny fanjifana oksizenina dia ampahany amin'ny ati-doha.
Soa ihany fa mora miditra izy ireo rehefa afaka mahita azy ireo amin'ny Internet. Ary koa, ny tranga vitsy dia ny vokatra mahaliana no notaterina hatreto.
Matetika, ny ankamaroan'ny fanafody ato amin'ity kilasy ity dia miasa tsara rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Midika izany fa raha te hankafy ny tombony farany ianao dia mila mampiasa azy mandritra ny herinandro maromaro.
Izay nootropic rehetra raisina ho ahitra, organika, na voajanahary dia tafiditra amin'ity sokajy ity. Matetika izy ireo dia mamboly matetika ary manome tombony voajanahary. Ny zava-mahadomelina amin'ity kilasy ity dia aleony matetika kokoa satria tsy misy atody na zavatra simika.
Iray amin'ireo lesoka lehibe indrindra ny hoe tsy manangona punch izy ireo raha ampitahaina amin'ny nootropics synthetic. Noho izany, ny iray dia mila maka dosie avo lenta mba hahazoana vokatra mitovy amin'ny an'ny synt synt.
Ny derao bitika B
Tahaka ny manondro ilay anarana, ny asidra Vitamin B dia ny nootropika nalaina avy amin'ny B Vitamins mba hahazoana ny tombontsoa tsara indrindra. Misy fiantraikany amin'ny haavon'ny glutamate, choline, ary dopamine ao amin'ny atidoha, ary izany dia mahasoa azy ireo amin'ny fitsaboana fikorontanan'ny kognitif, toy ny ADHD.
Amin'ny farany, ireo derivatives ireo dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny harerahana ara-batana sy ara-tsaina ary koa ny fanatsarana ny fihazonana ny fitadidiana.
Mety efa nianatra momba ny peptides tany aloha ianao. Ireo molekiola biolojika voajanahary izy ireo dia vita amin'ny asidra amine ary mifamatotra amin'ny fatorana simika covalent. Na dia tsy mora azon'ny olona aza izy ireo, misy Noopept misy ao amin'ny Internet sy any amin'ireo magazay. Mahery ny peptides ary nampiseho nanatsara ny famporisihana, ny fitadidiana, ny angovo, ny fahaizana mianatra ary ny fanairana.
Choline dia hita voajanahary ao amin'ny vatana, saingy mety iharan'ny tsy fahampiana isika indraindray. Vokatr'izany, mitarika ny fampihenana ny fahaizan'ny fahatsapana krizy ka noho izany ny fampihenana ny fahasalamana tsara amin'ny atidoha. Ny fandraisana ny nootropics choline dia manampy amin'ny fampitomboana ny famokarana ati-doha amin'ny acetylcholine neurotransmitters.
Ny suplola Choline dia azo raisina samirery na miaraka amin'ny racetams. Rehefa mivondrona izy ireo dia mitadidy fahatsiarovana, fahaizana mianatra ary fanatsarana amin'ny ankapobeny.
Ny ampakines dia sasany amin'ireo nootropics be mpitia indrindra izay nampidirina tato ho ato. Izy ireo dia miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana ny glutamate receptors amin'ny ati-doha. Vokatr'izany dia mitarika fitomboan'ny glutamate izy ireo, izay manatsara ny fianarana sy ny fitadidiana azy.
Ny vovony nootropic tsara indrindra amin'ny ankapobeny: Nootropic tsara indrindra ho fanatsarana fahatsiarovana: Nootropic tsara indrindra amin'ny fampisehoana atletika:
Ny fahadiovan'ny famafazana98% Flmodafinil
Fahadiovana ≥≥%% Pramiracetam Powder
Fahadiovana ≥%% vovobony karphedon
Maninona izahay no nandoa an'io:
Tena mandaitra izy io na dia ambany dosie kely aza.
Vitsy ny fiantraikany.
Ho tsapanao ao ny telo-polo minitra aorian'ny handraisanao azy.
Mitarika amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny fanampiana ny fananganana fahatsiarovana maharitra ela
Tsy mitondra fijaliana amin'ny lafiny maro. ie, ny vokatra euphoric
Tonga dia ao anaty 1-2 ora aorian'ny fakana azy io
Nahoana no noraisinay izany:
Manome valiny famporisihana lehibe
Dia mipetaka haingana ao amin'ny vatana
Ny haavon'ny haavo dia ampiharina ao anatin'ny adiny iray amin'ny fampiharana azy.
Ireto ny vovo-tsoratry ny zava-mahadomelina Nootropics 15 lehibe indrindra:
Ny vovony nootropic tsara indrindra amin'ny vovony-Flmodafinil
Ny nootropic tsara indrindra ho an'ny fanatsarana fahatsiarovana-Pramiracetam
Nootropic tsara indrindra amin'ny fampisehoana atletika - vovo-dronono Carphedon
Nootropic tsara indrindra ho an'ny torimaso- Adrafinil Powder
Manatsara ny faharanitan-tsaina tsara indrindra- Fladrafinil (CRL-40,941) Fangaroana
Mpanolo-tsaina tsara indrindra- Hydrafinil (9-Fluorenol) vovo-dronono
Ny fifangaroana nootropic haingana indrindra - Noopept (GVS-111)
Nootropic tsara indrindra ho an'ny neuroprotection-Nefiracetam Powder
Fampitomboana ara-tsaina tsara indrindra - Fangaro aniracetam
Ny nootropic tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer- J-147 Powder
Ny tsara indrindra miaro nootropic-Magnesium L-Threonate Powder
Ny nootropic tsara indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fiasan'ny fo- bomelina Nicotinamide Riboside Chloride
Ny nootropic tsara indrindra amin'ny fitsaboana diabeta-vovony Galantamine Hydrobromide
Nootropic tsara indrindra amin'ny ady amin'ny homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza - vovoka mifangaro 7P
Mpanatsara glutathione tsara indrindra - vovoka e-esteran'ny e-es-N-Acetyl-L-cysteine
Mampitaha ny vovo-dronono misy zava-mahadomelina 15 tsara indrindra amin'ny 2019
NAME RATING NY SITRAPONY soso-kevitra levitra ANTSASAK'AINA
Ny vovony Flmodafinil 5 Tena kely 100-200mg isan'andro 12-15 ora
Vovonan'ny Pramiracetam 5 Tena kely 600-1200mg isan'andro 5-6 ora
Carpedon poids 5 vitsy 200-750mg isan'andro 3-5 ora
Adrafinil vovoka 4.5 vitsy 600-900mg isan'andro 12-15 ora
Ny vovony Fladrafinil 5 Tsy misy fiantraikany ratsy 100-200mg isan'andro 6-7 ora
Ny vovony Hydrafinil 4.5 vitsy 50-150mg isan'andro 6-8 ora
Poavatra Noopept 5 vitsy 30-60mg isan'andro 3-6 ora
Ny vovony Nefiracetam 4.5 Tena kely 600-900mg isaky 3-5 ora
Ny vovony aniracetam 5 vitsy 1500mg 1-2.5 ora
J-147 vovoka 5 maro 20-30mg 1.5-2.5 ora
Magnesium L-Threonate vovoka 5 vitsy 1500-2000mg 44 ora
Ny vovony Nicotinamide Riboside Chloride 4.5 Tena kely 1000-2000mg 5.3 ora
Galantamine Hydrobromide vovony 4 maro 4-8mg 7 ora
Ny vovoka 7P 5 vitsy 5000mg 1-2 ora
Ny vovony N-Acetyl-L-cysteine ​​étil ester 4.5 vitsy 5000mg 5.6 ora
Ny vovony nootropic amin'ny ankapobeny
1. Fahadiovana≥98% Flmodafinil (CRL-40,940) vovoka 90280-13-0
Ho an'ny olona iray mitady lozomika tena mahomby nefa tsy manondraka be loatra ao anaty rafitra, dia ny fifangaroana Flmodafinil no tena fifanarahana. Fifaliana ampiasaina hampiasaina satria ny fatran'ny Flmodafinil ilaina dia 100-200mg mizara indroa isan'andro. Avy amin'ny valiny Flmodafinil nomen'ireo mpampiasa azy dia hita tokoa fa ity nootropic ity dia mahatonga anao hahatsapa sy hoheverina ho tompon'andraikitra amin'ny alàlan'ny fakany vola kely fotsiny.
Voaporofon'ny fampitomboana ny fahaizan'ny fanta-daza sy ny famokarana azy io amin'ny alàlan'ny fatran'ny histamine, orexin, glutamate, ary norepinephrine. Ankoatr'izany dia miasa ihany amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fahatapahan'ny dopamine ao amin'ny vatana.
Na dia iray aza amin'ny vaovao be indrindra eny an-tsena, dia ny vovony nootropics no tsara indrindra, noho ny tombontsoa entiny eo ambony latabatra. Ny iray amin'izy ireo dia ny fitomboan'ny fahalalana sy ny fitadidin'ny olona iray.
Faharoa, manampy amin'ny fikarakarana ny fahaketrahana madinidinika amin'ny alàlan'ny famerenana indray ny toe-tsaina mahazatra. Manampy ihany koa ny fitantanana ny ADHD sy ny fepetra hafa mifandraika izany. Ankoatr'izay, Flmodafinil dia fantatra fa mampitombo ny fifohazana, manatsara ny fanentanana ary mifantoka, ary vao mainka aza ny fahaizan'ny sain'ny olona iray.
Rehefa mampitaha ny Flmodafinil sy modafinil dia maro ny lafin-javatra izay misy, ohatra, ny lafiny taha Flmodafinil dia vitsy kely raha oharina amin'ireo modafinil. Na dia toa mitovy ihany aza izy ireo, tsy mitovy ny fomba fiasan'izy ireo ary io no mahatonga an'i Flmodafinil bioavailable.
Raha ny maha-ara-dalàna Flmodafinil dia miankina amin'ny firenena niavianao. Raha mividy vovony Flmodafinil any Canada ianao dia tsy mila fanafody ilana azy, fa ilainao ny mividy Flmodafinil any Eropa.
Raha manontany tena ianao hoe aiza ny hividy vovoka Flmodafinil, dia tsy tokony hikaroka intsony ianao. Afaka misafidy ny hividy Flmodafinil amin'ny Internet ianao ho safidy mora kokoa sy mora vidy kokoa. Izahay no loharanom-boalavo nootropic ara-dalàna izay ahafahanao mividy vovoka Flmodafinil CRL-40,940.
Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny haavon'ny histamine, orexin, dopamine, glutamate, ary norepinephrine.
Ny fatra natokana dia 100-200mg isan'andro.
Efa nosedraina tamin'ny biby io.
Nootropic tsara indrindra ho fanatsarana fahatsiarovana
2 Fahadiovana Primair98am Pramiracetam 68497-62-1
Na ianao mianatra mianatra hanao ny fanadinana farany na ho zokiolona maniry ny hitahiry ny volon-dohany, avy eo ny pramiracetam. Ny nootropic tsara indrindra indrindra rehefa mitazona fahatsiarovana mahery vaika. Ny Pramiracetam dia an'ny fianakavian'i racetam saingy avo telo-polo mahery mahery noho ny racetams izany.
Ny vovoka Pramiracetam dia miasa amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fampiakarana choline sy ny famokarana oksida Nitrika ao amin'ny ati-doha. Ny tombony lehibe Pramiracetam dia misy; fanatsarana ny fifantohana sy ny fanarenana avy amin'ny ratra amin'ny atidoha. Izy io koa dia manampy amin'ny fanodinana sy fisorohana ny amnesia.
Ny stack Pramiracetam dia matetika misy loharano choline hanoherana ny fihenan'ny acetylcholine ao amin'ny ati-doha ary hanatsara ny fiasan'ny kognita. Azo namboarina tamin'ny Adrafinil, Armodafinil, ary Modafinil koa izy io. Raha mampitaha ny Pramiracetam vs. Phenylpiracetam dia mazava fa ny Pramiracetam dia tsy miteraka voka-dratsy toy ny fahasosorana, maloiloy ary aretin'andoha toa ity farany.
Raha mikasa ny hividy Pramiracetam amin'ny vovony antsinjarany na vovoka lehibe, dia afaka miankina aminay foana ianao.
Misy fihetsehana haingana.
Manome aingam-panahy ny psycho nefa tsy mitarika ho amin'ny hyperstimulation.
Fohy ny faharetan'ny fitsaboana.
Io no matsiro matavy indrindra raha miaraka amin'ny sakafo.
Nootropic tsara indrindra ho an'ny fanatanjahantena atletika
3 Fahadiovana≥98% Carphedon (Phenylpiracetam) Powder 77472-70-9
Carphedon dia derivative piracetam izay tsy misy afa-tsy ny fahasamihafana ara-batana amin'ny piracetam dia ny phenyl groupe miraikitra aminy. Noho io vondrona io, ny dabozia vovoka phenylpiracetam ilaina hanomezana vokatra mitovy amin'ny Piracetam dia ambany kokoa ary heverina ho 20-60 heny mahery kokoa noho Piracetam.
Ny ankamaroan'ny tsikera Phenylpiracetam dia mahatsikaritra ny fahombiazany amin'ny fampiroboroboana ny atletisma noho ny vokadratsy omeny. Manampy ny olona hanohitra hatsiaka koa izany. Tombony hafa koa ny fitantanana epilepsy, tapaka lalan-dra, aretin-tsaina ary reraka.
Phenylpiracetam dia tsy tokony halaina mandritra ny torimaso satria mety hiteraka korontana amin'ny torimaso izany. Ary koa, tokony hoentinao roa na efatra isan-kerinandro na tsingerin-taona mba hisorohana ny vatana amin'ny fananganana fandeferana amin'ny vokatra manaitaitra.
Nootropic tsara indrindra ho an'ny torimaso
4 Fahadiovana≥98% Powder Adrafinil 63547-13-7
Raha toa ny tanjonao dia ny hampitombo ny fifohazana ary hampihena ny torimaso, dia tokony hieritreritra ny handray vovoka adrafinil ianao. Ny ankamaroan'ny fanadihadihana Adrafinil dia mampiseho fa manampy amin'ny fanampiana olona iray hiambina mandritra ny fotoana maharitra kokoa. Amin'ny resaka Adrafinil vs. Modafinil antsasaky ny fiainana, ity farany dia manana iray lava kokoa. Adrafinil kosa dia navadika ho modafinil raha tao amin'ny vatana nanampy ny antsasaky ny vokany noho izany dia maharitra kokoa ny vokany.
Ny vokatra Adrafinil hafa dia misy ny fitomboan'ny fifantohana; fanatsarana ny fahaizan'ny olona mianatra sy ny fitadidiany. Na dia mety hiteraka voka-dratsy vitsivitsy aza izany, dia heverina ho fanentanana azo antoka izany satria tsy miteraka ny ankamaroan'ny voka-dratsy tsy mahafinaritra mifandraika amin'ny fanentanana.
Ny rano na ny ranona citrus no tena ahazoana azy tsara indrindra noho ny tsiro poeta Adrafinil mangidy. Satria ara-dalàna izany any amin'ny ankamaroan'ny firenena, azonao atao ny mividy vovoka adrafinil amin'ny Internet raha tsy mila fanafody.
Ny fatra azo atao dia ny 600-900mg.
The Fiantraikany Adrafinilmaharitra 12-15 ora.
Tsy tokony ho raisina isan'andro izany na mandritra ny fotoana maharitra satria mampandeferana.
Fanamafisana faharanitan-tsaina tsara indrindra
5 Fahadiovana ≥%% Fladrafinil (CRL-98) Powder 40,941-90212-80
Ianao ve mitady zavatra izay hanampy anao hisondrotra amin'ny fahafaha-manao mihoatra ny efa nofinofisinao? Ny vovo-dronono Fladrafinil no zava-mahadomelina tsara indrindra amin'ny fampitomboana ny fahazavan-tsaina sy ny fahaizany. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fahasimban'ny dopamine noho izany ny fifehezana ny valiny ara-pihetseham-po, ny fianarana ary ny fifantohana.
Fladrafinil dia mitovy amin'ny vovoka modafinil raha ny firafitra sy ny vokany ary ny hany mampiavaka azy dia ny molekiola fluoride fanampiny. Ny fanampiana dia mahatonga an'i Fladrafinil ho mora voataona ao amin'ny vatana.
Vitsy ny voka-dratsin'i Fladrafinil, saingy mety hitombo ny hamafiny amin'ny fampiasana tsy tapaka. Soa ihany fa mora azo izy io, ary afaka mividy Fladrafinil amin'ny Internet ianao raha tianao.
The Dosis Fladrafiniltokony ho manodidina ny 100-200 mg ao anatin'ny iray andro.
The Vokany Fladrafinilmitranga tsy fahita firy.
Izy io dia in-3-4 mahery kokoa noho Adrafinil sy Modafinil.
Mpanolo-tsaina tsara indrindra
6 Fahadiovana≥98% Hydrafinil (9-Fluorenol) Powder 1689-64-1
Vovon-tsolika Hydrafinil, fantatra koa amin'ny hoe Fluorenol dia mpanakana ny reoptake dopamine izay ny vokany lehibe indrindra dia ny fampitomboana ny fifantohana. Ny tombony Hydrafinil hafa dia misy ny angovo misimisy kokoa, ny fifantohana tsara kokoa ary ny fihenan'ny havizanana.
Ny mekanisma fiasan'ny Hydrafinil dia misy koa ny fitomboan'ny histamine, norepinephrine, ary ny glutamate haavony hanatsarana ny toetran'ny tena. Rehefa mampitaha ny bioavailil Hydrafinil vs. modafinil dia nampiseho fa fohy kokoa ny Hydrafinil nootropic.
Ny fivarotana azy dia tsy voafehy noho izany dia afaka mividy Hydrafinil (9-Fluorenol) manta ianao amin'ny fotoana rehetra tianao.
Mora raha mitaha amin'ireo nootropika hafa.
Hydrafinil dia tsy dia mandrisika loatra, noho izany dia vitsy ny fihetsika ratsy.
The Vokatra Hydrafinilnoheverina ho ambany.
Nootropic haingana indrindra
7 Fahadiovana≥98% Noopept (GVS-111) Powder 157115-85-0
Ny vovo-dronono Noopept dia nootropic syntetika be mpampiasa ho famenony. Io no fanafody mahomby indrindra miasa haingana satria mety hahatsapa ny vokany ianao ao anatin'ny minitra vitsy. Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fomba fiasan'i Noopept, dia holazaiko aminao ny fomba. Ny fomba fiasan'ny asany dia mitaky fampitomboana simika ati-doha roa tena ilaina; NGF sy BDNF.
Ny tombony Noopept dia misy fanatsarana ny fahatsiarovan'ny olona iray, ny fahazavany, ny hafainganan'ny eritreritra, ny fifantohana, ny fahatsapana ary ny hafanam-po.
Ny vokatry ny Noopept tokana dia ny aretin'andoha izay vokatry ny fatra fatra ambony na fampiasana ny vovoka Nootept nootropic voalohany. Ny tombony azon'i Noopept dia ara-dalàna izy io ary voafehy ihany any amin'ny firenena vitsivitsy. Midika izany fa raha mila mividy Noopept ianao dia mila mandinika ny lalànan'ny firenenao. Amin'ny fanaovana an'io dia azonao atao ny milaza raha mila fanafody na tsia.
The Dosage Noopeptdia 30-60 mg isan'andro.
Tena mahay mandefitra izy io ary misy fiantraikany ratsy.
Izany dia tsara mipetaka amin'ny choline.
Nootropic tsara indrindra amin'ny neuroprotection
8 Fahadiovana≥98% Powder Nefiracetam 77191-36-7
Rehefa avy nijaly tamin'ny lalan-drà dia marary marobe no voalaza fa tratry ny tsy fahasalamana, izay mety hiteraka fahasimban'ny ati-doha ary koa very fahatsiarovana. Soa ihany, Nefiracetam dia nanaporofo fa miaro amin'ny famonoana. Izy io dia manao izany amin'ny alàlan'ny fifehezana ny famantarana NMDA izay manakana ny fiakaran'ny haavon'ny glutamate.
Izy io dia iray amin'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny mpikambana racetam, ary ny sasany amin'ireo tombontsoa hafa dia ny fanatsarana ny toe-po, ny fianarana ary ny fitadidy. Rehefa mampitaha nefiracetam VS aniracetam, ny ankamaroan'ny fanamarihana nefiracetam dia mitatitra fa miteraka fanatsarana lehibe amin'ny toetran'ny olona iray izany.
Ny vokadratsy Nefiracetam dia vitsy, noho izany dia heverina ho azo antoka sy mandefitra tsara.
Izy io dia fanafody mampitony matavy; noho izany, ny fatra ambany dia mitombina fa mahomby kokoa raha ampitahaina amin'ny piracetam.
Nefiracetam dia nandalo fandalinana biby ary koa fandalinana olombelona sasany.
Ny dosie dia 100mg-900mg isan'andro, in-droa indroa; ny iray maraina ary ny faharoa ny tolakandro.
Fanamafisana ara-tsaina tsara indrindra
9 Fahadiovan'ny fanadiovana98% vovoka 72432-10-1
Ny aniracetam vovoka maranitra dia nootropic ampakine matanjaka kokoa noho ny piracetam. Mila ny medaly raha resaka fanatsarana ny saina ary miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo mpandray AMPA; ny receptor glutamate CNS mahazatra. Ny mpandray ny AMPA dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana fahatsiarovana sy fianarana.
Ny tombontsoa hafa amin'ny vovoka Aniracetam dia misy ny fitomboan'ny reflexes, ny fihenan'ny fitaintainanana, ary ny fitomboan'ny fahatsapana. Ny voka-dratsy aterak'izany raha oharina amin'ny piracetam dia mahatonga azy io ho malaza kokoa raha tsy hiteny ny valiny izay matanjaka lavitra noho ny kaopy kafe.
Ny vovony aniracetam dia mampitombo ny fahaizan'ny atidoha amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny tosika neurotrofika nateraky ny atidoha, izay miasa toy ny zezan'ny atidoha.
Mateza-matavy tokoa io.
The Dosis aniracetamdia 1500mg mizara indroa ao anatin'ny iray andro.
Afaka mahatsapa ny Vokany15-20 minitra aorian'ny fakana azy.
Ny nootropic tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer
10 Fahadiovana≥98% J-147 Powder 1146963-51-0
Ny vovony J147 dia zava-bita namboarina tamin'ny taona 2011, ary mety hanimba ny fahaverezan'ny fahatsiarovana izany, miadana na manafoana ny aretina Alzheimer. Izany dia isan'ny tarika phenyl hydroxide ary nalaina tamin'ny singa curicex curry spice.
J147 dia miasa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hetsika synthesie ATP ao amin'ny mitochondria. Amin'izany dia miaro ny sela neurônana amin'ny poizina ateraky ny ati-doha. Ity fikarohana ity dia nanjary fahombiazana ho an'ny mpikaroka satria ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina Alzheimer dia nikendry ny fametrahana takelam-paty amyloid tao amin'ny atidohan'ny marary Alzheimer. Ny zava-mahadomelina Alzheimers dia tsy nanampy be akory.
Betsaka ny fitsapana ara-pitsaboana J147, ary hatreto dia nahomby sy heverina ho marin-toerana. Miaraka amin'ny valim-panadinana J147 nampanantena, dia miharihary fa ny J147 dia afaka manampy amin'ny fitsaboana Parkinson sy ny lalan-dra.
Ny J147 dia manampy amin'ny fitsaboana ny aretina neurogenerative.
Izy io dia fanafody manandrana manana fiadiana amin'ny fahanterana.
Ny J147 dia miasa amin'ny alalan'ny mamatotra proteinina hita ao amin'ny mitochondria (sela izay manampy amin'ny famokarana angovo).
Nootropic manohitra tsara indrindra
11 Fahadiovana≥98% Magnesium L-Threonate Powder 778571-57-6
Efa nieritreritra ve fa ny fahaizanao misaina dia mety hijanona ao na dia amin'ny fahanterana aza? Ny vovo-magnesia L-Threonate dia sira manezioma asidra L-threonic tsy manam-paharoa izay mameno ny maneziôma ao amin'ny ati-dohan'ny olona iray, ary mandaitra kokoa amin'ny fomba fiasa. Izy io dia iray amin'ireo endrika maneziôma mahavelona indrindra eny an-tsena.
Ny vovoka magotika L-Threonate nootropic dia miasa amin'ny fampitomboana ny hakitroky ny synaptika manodidina ny faritra hippocampus hita ao amin'ny ati-doha. Amin'ny fanaovana izany dia mampiroborobo ny fahatsiarovana lava sy fohy ary miasa na amin'ny tanora na amin'ny antitra.
Mampitombo ny satan'ny magnesium amin'ny vatana izany koa ny fahaizany manapa-kevitra.
Ny fatra mety tsara Magnesium L-Threonate dia 1500-2000mg
Manampy amin'ny fanatsarana ny fitadidiana, mampihena ny fitadidiana noho ny fahanterana, ary koa manampy amin'ny famoronana lalana vaovao.
Magnesium L-Threonate dia noforonin'ny mpikaroka voalohany tao amin'ny MIT izay nahitana loka mpandresy Nobel.
Nootropic tsara indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fiasan'ny fo
12 Ny fahadiovana% powder%%%% Nicotinamide Riboside Chloride vovony 98-23111-00
Nicotinamide riboside Chloride vovoka no dinônôotinina adeninina nicotinamide vaovao indrindra eny an-tsena, izay mpialoha lalana vitamina. Ny tombony miaraka aminy dia ny mivadika ho NAD + indray mandeha ao amin'ny vatana raha oharina amin'ireo NAD + teo alohany.
Ny vovo-dronono Nicotinamide riboside Chloride dia mampihena ny mety hijaly amin'ny aretim-po amin'ny alàlan'ny fanovana ny fanovana mifandraika amin'ny taonanao amin'ny arteria. Amin'ny fampiakarana ny haavon'ny NAD +, misy fihenan'ny hateviny, hamafiny izay manampy amin'ny hafainganam-pandeha.
Ny tombotsoan'ny Nicotinamide riboside Chloride hafa dia ny fanampiana ny fihenan-danja, ny fihenan'ny risika homamiadana, ny fanampiana amin'ny fitsaboana jet lag, ary ny fanampiana amin'ny fampiroboroboana ny fahanterana hozatra mahasalama.
Tsy dia zava-dehibe ny fiantraikany amin'ny lafiny ratsy, fa mety hitombo kosa ny hamafin'ny hamafiny.
Mampisondrotra ny haavon'ny NAD + hatrany amin'ny 2.7 heny.
Ny halatra chôneida Chôlidide nôvôleatra Nicotinamide dia 1000-2000mg isan'andro.
Izy io dia azo antoka miaraka amin'ny vitsy an'isa Nicotinamide riboside Chloride lafiny efa voalaza.
Nootropic tsara indrindra amin'ny fitsaboana diabeta
13 Fahadiovana ≥%% vovoka Galantamine Hydrobromide 98-69353-21
Ankehitriny, diabeta dia iray amin'ireo fepetra lehibe iaretan'ny olona manerantany. Soa ihany fa io fitambarana misy azota io dia voaporofo fa manampy amin'ny fitantanana ilay aretina. Izy io dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny lalan'ny signaling insuline. Ny Galantamine Hydromide koa dia mampihena ny hatavezina amin'ny fampidinana ny fivontosana, ny fanoherana ny insuline, ny lanjan'ny vatana ary ny haavon'ny kolesterola.
Taloha izy io dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana ny fahalemen'ny hozatra sy ny fahatsapana, ary ny fantsom-pifamoivoizana nateraky ny aretin'ny rafi-pitatitra.
Ny fampiasana Galantamine Hydromide hafa dia misy ny fanamafisana ny fiasan'ny kognita, ny fihenan'ny fanaintainana aretin-tsaina, ary ny fanatsarana ny soritr'aretina amin'ny zaza autista sy ny aretin'i Alzheimer.
Izy io dia azo avy amin'ny voninkazo sy ny bolam-boasary an'ny ranomandry kaokazy, Daffodil, lisy mena mena, Garanthus woronowii, ary ny ranomandry an'i Voronov.
Galantamine Hydromide dia voageja tsara, manana bioavailability am-bava ny 90%.
Izy io dia manampy amin'ny fitantanana ny aretin-ketsa toa an'i Alzheimer amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahatsiarovana, ny fahatsiarovan-tena ary ny fahaizana manatanteraka ny asa isan'andro.
Nootropic tsara indrindra amin'ny ady amin'ny homamiadana cervical
14 Fahadiovana≥98% Vovoka mivalana 7P 1890208-58-8
Ny vovon-tsolika 7P dia vovoka fotsy sy fotsy izay noforonina tao anaty singa mitambatra miaraka amin'ny tanjona hamantarana ireo mpanohitra antagonista mpandray ny tromboxane mpandray anjara. Ny vovoka nootropics 7P dia manosika ny fitomboan'ny axon-gap positif 43 mitondra mankany amin'ny fanentanana ny famerenan'ny axon in vivo.
Ny tambatra 7P dia naneho ny hetsika ambony indrindra hiadiana amin'ny fivontosen'ny valan-jaza amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny mikrostrostika amin'ny fomba mifototra amin'ny dosie.
Ny sasany amin'ireo tombo-bidy 7P dia misy; mitombo ny fandrindrana, fikarakarana ny fahasimban'ny atidoha mifandray amin'ny alikaola ary fisorohana ny fanakorontanana manodidina ny atidoha. Izy io koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny toe-po ary miady amin'ny havizanana.
Somary mora soloina amin'ny rano sy ny ethanol.
Ny fatra mety ho 7P soso-kevitra natolotra dia tokony ho manodidina ny 5000mg.
Adiny iray na roa ora vao hiseho.
Mpanatsara glutathione tsara indrindra
15 Fahadiovana≥98% N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder 59587-09-6
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester (NACET) dia endrika ester an'ny N-acetylcysteine ​​(NAC) izay mahatonga ny esterification manampy amin'ny fitomboan'ny lipophilicity an'ny NAC ka manatsara ny fivarotam-panafody. Ity endri-javatra ity dia manampy bebe kokoa ny fitrandrahany avo lenta izay voafandrika ao anaty sela mitarika amin'ny fanovana azy ho cysteine ​​sy NAC.
Izy io dia mpiambina GSH manana bioavailability avo lenta. Ny NACET dia miasa amin'ny alàlan'ny fanoloana ny NAC ho toy ny mpandraharaha mucolytic, toy ny antioxidant mifandraika amin'ny GSH, ary amin'ny maha-anti-paracetamol antidote.
Malalaka be ao anaty rano sy solika organika.
Misintona haingana any amin'ny sela izy io taorian'ny fitantanana.
NACETmanampy amin'ny fitantanana ny aretin-ketsa toy ny aretina Alzheimer.
Inona no tokony hodinihina alohan'ny hividianana nootropika
Ny fisafidianana ny nootropika mety dia mila fikarohana kely, saingy mendrika izany satria manome alalana anao ny valiny tadiavinao. Ireto misy lafin-javatra sasany tokony hitadidy mandritra ny fikatsahana nootropic;
Ny maka nootropika indray mandeha isan'andro ary manadino izany dia izay safidin'ny ankamaroan'ny olona. Saingy raha ny tena izy, sarotra ny mahita nootropika tena tsara miasa amin'ny elanelan'ny fatra toy izany. Mandehana ho an'ireo izay azo alaina indroa na intelo isan'alina mba hahatonga ny vatanao ho zatra milamina tsara mandritra ny tontolo andro raha ampitahaina amin'ny fatra iray manaitra iray.
Tsy te hividy nootropika izay mihoatra ny teti-bolanao ianao. Ianao kosa anefa dia tokony mila mandinika fa samy hafa avokoa izy rehetra ireo ary tsy mitovy ny fomba fanamboarana azy noho izany ny vidiny. Tsy manantena koa ianao fa hividy fatran'ny nootropika avo be miaraka amin'ny kalitao amin'ny vidin'ny voanjo. Ka alohan'ny hametrahana ilay mora vidy indrindra dia alao antoka fa hanao asa tsara izany. Izany anefa tsy midika fa tsy mihoatra ny lootropika ianao; mandehana amin'izay mifanaraka amin'ny paosinao.
Ny nootropic rehetra dia misy fiantraikany. Raha mila iray izay afaka mampitombo ny fifantohanao ianao, dia misy iray amin'izany. Amin'ny lafiny iray, raha mikendry ny hifehy ny aretin'i Alzheimer ianao, dia mila mahita ny tsara indrindra amin'izany.
Ary koa, ny sasany dia mety hiteraka voka-dratsy maro kokoa raha oharina amin'ny hafa. Tsy misy olona te hanao tsara ao an-tsekoly afa-tsy ny tsy fahampian'ny fo. Voalohany indrindra, ny fahasalamanao dia tonga aloha, ary tsy te handray zavatra mety hanimba anao ianao.
Indraindray, mety te hanambatra ny nootropika roa na mihoatra ny mahazo vokatra kognitif tsara kokoa. Ianao kosa anefa dia mila manamarika fa tsy ny rehetra nootropics dia azo antoka rehefa miforitra. Na dia fantatra aza fa ny fika dia mampitombo ny fahamaotinana ary mihena ny voka-dratsiny, dia mety tsy mahasalama anao ny sasany. Ianao àry dia tsy maintsy mahalala ny fangaro ho an'ny tsirairay sy ny fomba nifandraisan'izy ireo alohan'ny mividy azy ireo hametrahana azy mivalona.
Ny zavatra iray hafa tokony hofantarinao dia ny habetsaky ny fikarohana natao tamin'ny nootropic. Ny sasany dia tsy manana ny familiana fikarohana fa ny sasany dia tsy azo andramana amin'ny olona. Amin'izao vanim-potoana izao, dia misy fanafody maranitra maro izay mahomby ny fikarohana nataony.
Ka io dia azo antoka fa ho anao ihany no hisafidy vokatra iray izay efa navaozina tsara ary nohamafisina fa mahomby. Amin'ny alalanao, ianao dia matoky ny fiadanan-tsaina sasany ary koa ny fisorohana ny fandaniam-bola amin'ny fitrandrahana zavatra mety manimba anao na tsy asa.
Be ny voalaza momba ny vokatra rehetra azon'ireo izay nampiasa azy ireo taloha. Ny fampahalalana toy izany dia tokony hanampy anao handamina ny tsara indrindra ary manamaivana ny fotoana hividianana nootropic izay tsy mandeha. Mandehana any amin'ireo manana valiny tsara indrindra sy vitsivitsy ratsy.
Amin'ny ankapobeny, be dia be ny fiheverana alohan'ny handany ny volanao amin'ny nootropic rehetra. Mba hahazoana ny tsara indrindra dia mila manisy marika ireo teboka nomena rehetra ianao mba handaminana ilay zava-dehibe indrindra amin'ny teboka raha tsy izy rehetra.
Tombontsoa amin'ny fampiasana nootropics
Isan'andro dia mitady sisika izahay; zavatra izay hahatonga antsika ho tsara kokoa noho ny hafa. Efa nieritreritra ny ivelan'ny boaty ve ianao ary nihevitra ny fampiasana nootropics dia iray amin'ireo fomba mety hanomezana lanja ny fiainanao?
Ny fampiasana nootropics dia misy tombony maro, ary raha tsy tsikaritrareo ny valiny lehibe miaraka amin'ny fampiasana nootropic iray dia azonao atao ny mitambatra roa na mihoatra raha mahita valiny miavaka kokoa.
Ireto ambany ny sasany amin'ireo tombontsoa nootropic;
Ampitomboy ny fifantohanao
Efa nahatsapa zavatra hafa momba ny hafa ve ianao ka nanadino ilay andraikitra teo am-pelatananao? Ara-dalàna izany, fa indraindray mety hahatsapa ho sahirana ianao mifantoka amin'ny zavatra iray amin'ny fotoana iray, ka noho izany dia manana andiany maro tsy vita ary hevitra vita amin'ny antsasa. Ka inona no ataonao?
Ny fandraisana ny nootropika dia nanaporofo fa nanampy tamin'ny fanampiana anao bebe kokoa ary mandritra ny fotoana maharitra kokoa. Avy eo, azonao atao ny manome ny asa rehetra ny saina ilaina azy na dia mahatsapa fa lasa be loatra ao an-tsainao aza.
Angamba efa namaky lohahevitra iray manokana ianao, efa azonao tsara ihany nefa hadinony ny zava-drehetra na dia talohan'ny andro fanadinana aza. Tsy tokony hampisy korontana anao intsony izany; Ny maka nootropics dia voaporofo fa ilaina amin'ny fitadidiana ny olombelona
Manatsara ny fahatsiarovan'ny olona iray izany amin'ny alàlan'ny fanatsarana sy fanamboarana ny faritra rehetra amin'ny fahatsiarovana azy ary mahatadidy ihany koa. Ny Nootropics dia manohana ny famolavolana sela ho an'ny atidoha ary manamafy ny fampifandraisana ireo sela. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana, fanatsarana sy fampatsiahivana ny angon-drakitra, dia mihatsara.
Manatsara ny fahasalamanao amin'ny atidoha amin'ny ankapobeny
Ny atidohany dia iray amin'ireo ampahany lehibe indrindra amin'ny vatana. Ny fampiasa azy anefa, dia tratran'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fandaharam-potoana be atao. Miaraka amin'ny fampiasana nootropics, tsy vitan'ny fanatsarana ny fitadidianao fotsiny ianao fa mihatsara koa ny fahasalaman'ny atidoha amin'ny ankapobeny.
Izany dia tratra amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny renirano oksizenina mankany amin'ny atidoha sy ny fikojakojana ireo sela sy selan'ny atidoha, izay mahatonga ny atidoha ho mahomby kokoa.
Atsaharo ny fihetseham-ponao
Ny toe-tsaina ratsy dia mety hanimba ny andronao ary hahatonga anao tsy hanao ny hetsika araka ny tokony ho izy. Soa ihany, misy vokatra azo, mety tsara kokoa ny toe-po, mahatonga anao ho sambatra kokoa. Ny Nootropics dia afaka mampita an'io ka mahatonga anao hifantoka sy hifantoka bebe kokoa amin'ny asa mety hanananao.
Mpiara-manorina, mpitarika ny fitantanan-draharahan'ny orinasa; Nahazo PhD avy amin'ny Oniversite Fudan amin'ny simia biolojika. Fanandramana mihoatra ny sivy taona amin'ny sehatry ny simika biolojika momba ny simia fanafody. Fanandramana manan-karena amin'ny simia kombinatorialy, simia fanafody ary syntetika sy fitantanana tetikasa.
Wood S, Sage JR, Anagnostaras SG (2014). "Psychostimulants sy kognition: Pharmacol. Apok. 66 (1): 193–221.
Frati P, Kyriakou C, Marinelli E, Vergallo GM, Zaami S, Busardò FP (2015). "Ny zava-mahadomelina mahomby amin'ny fampivoarana ny kognita sy ny vatana:. Curr Neuropharmacol. 13 (1): 5–11.
Giurgea, Corneliu, (JanuarY, 1977). "Fanafody Nootropic". Fandrosoana amin'ny Neuro-Psychopharmacology. 1: 235–247
1.Fahafantarana ireo karazana nootropics
2. Ampitahao ny vovoka nootropic fanafody 15 tsara indrindra amin'ny taona 2019
3. vovoka nootropic tsara indrindra
4.Notropic tsara indrindra amin'ny fanatsarana ny fitadidiana
5.Notropic tsara indrindra amin'ny fampisehoana atletisma
6.Notropic tsara indrindra amin'ny famohazana
7. Fanatsarana ny faharanitan-tsaina tsara indrindra
8. Mpanentana tsara ny saina
9.Nototropic miasa haingana indrindra
10.Notropic tsara indrindra amin'ny neuroprotection
11. Fanatsarana ara-tsaina tsara indrindra
12.Ny nootropic tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer
13.Nototropic antiaging tsara indrindra
14.Notropic tsara indrindra amin'ny fampiroboroboana ny asan'ny fo
15.Notropic tsara indrindra amin'ny fitsaboana diabeta
16.Notropic tsara indrindra amin'ny ady amin'ny homamiadan'ny vozon-tranonjaza
17. enhancer tsara indrindra glutathione
18.Inona no tokony hodinihina alohan'ny hividianana nootropics
19. Tombontsoa amin'ny fampiasana nootropics
Mahazo tombony ve ny Palmitoylethanolamide (PEA)?
Febroary 5, 2020
Ny famoahana Dehydroepiandrosterone (DHEA) tsara indrindra
Vidio Fulkazil an-tserasera hoy:
Janoary 20, 2021 amin'ny 10: 19 pm
Reraka avy amin'ny nootropic stack URGENT
efa naka stack adrotin 600mg, 1500 oxiracetam, 1500 aniracetam (750 indroa isan'andro) sy ny hafa toa vitamina d3 sy B isan'andro Ary ny Alpha gpc nandritra ny herinandro lasa, mahatsiaro reraka ary manana kitapo mainty eo ambany masoko amin'ny fotoana rehetra, ara-dalàna olona tena tsy nisy aingam-panahy ary nieritreritra fa hanampy ahy izany satria matetika aho mahatsiaro reraka ihany, niasa nandritra ny andro vitsivitsy i Stack nefa izao dia tsapako fa tsy vitako ny niatrika asa iray raha tsy nahatsiaro ho sorena sy reraka aho, misy torohevitra ve?
Janoary 21, 2021 amin'ny 4: 13 pm
Miorina tsara izany. Miezaha tsy handray izany matetika? Aza manandrana mampiasa azy io afa-tsy indroa isan-kerinandro, ary mandeha bisikileta miaraka amin'ireo stacks hafa izay mampiasa rafitra hafa. Ohatra, mifandimby eo anelanelan'ny phenylpiracetam / choline stack sy ny caffeine / theanine / uridine stack aho. Indraindray aho dia manampy acetyl-l-carnitine amin'ny iray amin'izy ireo.